Iyo Apple Watch inohwina mubairo wegoridhe weakanakisa dhizaini | Ndinobva mac
Apple Watch Inohwina "Goridhe" Mubairo weYakanakisa Dhizaina IF IF Mubairo 2015
Ipo Apple ichienderera mberi kugadzirira kuvhurwa kwe Apple Tarisa munaApril, ndisina kumboibura pamusika, yakatokunda iyo KANA IF Goridhe Mubairo kubva kuInternational foramu 2015 yeakanakisa dhizaini mumakwikwi ayo epagore ekugadzira maindasitiri uko vatongi vakazivisa dhizaini yeApple Watch "icon."
Zvinoenderana nezvakataurwa nematare edzimhosva, pfungwa yekubatanidza classic zvigadzirwa senge dehwe nesimbi Uchishandisa zvemazuva ano tekinoroji kugadzira yakanyanya kugadzirisika fashoni chishongedzo, zvakaguma mune chinonaka chigadzirwa chinopa mushandisi chiitiko chakazara. Zvikwiriso zvepamusoro zveApple Watch zvakaenda kune zvese zvese, chidimbu chinoshamisa chose. Kwatiri, yatove chiratidzo.
Sezvineiwo, Apple Watch yaive imwe yezvinhu zviviri zvine chekuita nenharembozha kuhwina mubairo weGoridhe. kuva nevamiriri makumi matanhatu nevasere yemakwikwi. Kana tikatarisa kuwanda kwepasirese, kwaive nezvigadzirwa 1624 zvakapihwa uye makumi manomwe nemashanu chete ndivo vakagamuchira zita rekuti "goridhe".
Iyi mibairo yatove nenhoroondo refu uye kufukidza akakosha akakosha senge sarudzo yemidziyo, kuremekedza nharaunda, dhizaini yemhando, kukosha kwebrand, ergonomics ...
Kunze kweApple Watch, Apple yakahwinawo mimwe mibairo pakutanga pachiitiko ichi nezvigadzirwa zvakaita se iPhone 6, iPad Mhepo kana yakanangana neMac, kuwedzera kune zvimwe zvinhu zvakaita seEarPods kana Apple Keyboard. Pakazara ivo vanga vari 118 iF dhizaini mibairo avo vakaenda kuApple nevane 44 vavo vachitamba chikamu che "goridhe".
Ini ndinofunga iwo mubairo wakasarudzika-wekuyedza dhizaini iyo isingori chete simba rayo pane yekushongedza dhizaini pachayo, asi zvakare iri yakanyanyisa kuita, inogadziriswa uye pamusoro pezvose zvigadzirwa zvinehungwaru zvinoshandisa zvinhu zvekare senge "vhiri" se pamba semuenzaniso netambo dzinochinjika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Inohwina "Goridhe" Mubairo weYakanakisa Dhizaina IF IF Mubairo 2015
Anenge asimbiswa, iyo MacBook Air Retina ichaunzwa kuKeynote munaKurume 9
Zvaunofanira kuita kana Mac yako ikasaratidza zuva uye nguva nemazvo